Warqadda Rafcaanka ee Amazon, Koontada Iibiyaha oo la Hakiyay, Qorshaha Waxqabadka
Lataliyahaaga Rafcaanka Amazon
Sidee loo Qoraa Warqad Codsi Codsi Amazon ah iyo Qorshe Waxqabad?
Si fudud noo bilaw Wadahadal toos ah hadda ama dhammeystir foomka baaritaanka ee khadka tooska ah ee hoose oo leh faahfaahintaada ka dibna la-taliyeheennu wuxuu ku laaban doonaa saacad ka dib. Nala soo xiriir si aad u hesho warqad rafcaan xayiraad oo Amazon ah.
Faham Sababta Koontada Iibiyaha Amazon loo Hakiyay!
Ogaanshaha sababta ka joojinta koontada waa talaabada ugu horeysa ee lagu doonayo in akoonka dib loo bilaabo. Ogaanshaha dhibaatada waxay u baahan tahay aqoon khabiir ah oo ku saabsan cilmiga. Khabiirkeena koontada Iibiyaha ayaa kaa caawin doona inaad hesho aasaaska sababta joojintaada waxayna kuu sharxi doonaan sida aan kaaga caawin karno inaad qorto wax qumman Waraaqda Rafcaanka Amazon. Nala soo xiriir hadda oo hel ASP-gaaga.
Waxaan Furnahay 24 Saac Maalin, 7 Maalmood Toddobaadkii.
Dalbo La-talin Bilaash ah
La taliyayaashu waxay kusoo laaban doonaan 1 Saac
Sideen uga hortagi karaa ganaaxani inay dhacdo mustaqbalka?
Waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh uga fikirto waxa ku saabsan sida aad uga hortagi lahayd inay tan oo kale mar dambe dhacdo. Amazon waxay filan doontaa inaad fuliso qorshe kasta oo ficil ah mararka qaarkoodna waxay soo celin doonaan koontadaada Iibiyaha ee Amazon markii aad muujiso inaad fulisay qorshahaaga waxqabad.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad rafcaan ka qaadata koontadaada iibiyaha Amazon, ama dhinaca kale haddii aad jeclaan lahayd inaad aragto waxa ay u badan tahay dib u soo celintaadu, waan ku caawin karnaa. La hadal mid ka mid ah wakiilladayada si aad u maqashid la-talin bilaash ah iyo ra'yi khabiir ku ah kiiskaaga.
Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa racfaanka haddii liiskaaga la xiray iyo haddii ay dhacdo xadgudubyo siyaasadeed oo saameyn ku yeelan kara koontadaada koontada! La hadal mid ka mid ah wakiilladayada daryeelka macaamiisha si aad u hesho la-talin bilaash ah.
hel koontadaada Amazon ee La Joojiyay oo dib loogu soo celiyey 24 saacadood gudahood
In kasta oo ay qaadato daqiiqad in la joojiyo koontadaada iibiyaha amazon, helitaanka koontada dib loo soo celiyo waxay noqon kartaa geedi socod wakhti badan qaadanaya. Mararka qaarkood, waqtigan waa la dheereeyaa khaladaadka qaarkood halkan iyo halkaas oo uu ku sameeyo iibiyaha sababo kala duwan awgood sida caddayn la'aanta siyaasadaha Amazon, oo aan awoodin in la ogaado arrinta ka dambeysa Ka joojinta xisaabta Amazon, ama aadan awoodin inaad qorto cad cad oo xirfad leh warqad rafcaan ka joojin Amazon ah. Waan ka fahamsanahay dhibaatooyinkaas cidwalba waana taas sababta aan ugu balanqaadayno adeeg tayo leh waqtiga ugu dhaqsaha badan.
Aplus Global eCommerce waa xal hal-joog ah oo loogu talagalay xallinta buuxda ee baahidaada Rafcaan iyo in ka badan. Waqtigu wuxuu u dhexeyn karaa 24 saacadood ilaa 72 saacadood iyadoo kuxiran kakanaanta dhibaatada.
Sideen u joojin karaa akoonkayga Amazon?
Shaqaalaynta qof ayaa ku habboon haddana waxaad fiiro gaar ah u yeelan kartaa ogeysiiska ay soo dirtay Amazon, waxaadna la imaan kartaa Qorshe Waxqabad. Kuwani waa waxyaabaha asaasiga u ah racfaanka habboon.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la qoro warqad racfaan oo ganaax ah?
Waqtiga ugu gaaban ee ay qaadanayso in la qoro rafcaan waa 24 saac. Muddadani waxay ku kordhin kartaa ilaa 3-4 maalmood oo shaqo sida ku cad faahfaahinta koonto amazon gaar ah oo ganaaxday iyo nooca adeegga uu iibiyuhu codsaday.
Maxaad sameyn kartaa si aad dib ugu soo celiso Koontada Iibiyaha ee Amazon?
Waxaa jira adeegyo iyo xirmooyin kala duwan oo aan bixinno si dib loogu soo celiyo koontada iibiyaha Amazon. Waxaan bixinaa la talin, amazon racfaan gudbinta iyo adeegyo dabagal ah; waxay kuxirantahay nooca xirmada aad doorato.
Miyaad horey uga shaqeysay kiisaska ganaaxa iibiyaha ee Amazon?
Haa, waxaan la shaqeynay tiro badan oo kiisas kaladuwan oo laxiriira Ka joojinta xisaabta Amazon. Sidoo kale, waxaan leenahay koox halyeeyo ah oo ka socda arimahan.
Maxaa dhacaya haddii Amazon ay codsato macluumaad dheeri ah?
Waxaan qabanaa racfaanka ilaa ay ka gaarto hadafkeeda - taas ayaa ah in dib loo soo celiyo. Ka dib markii aan kugu soo dallacno hal mar, waxaan ka shaqeynaa tallaabo kasta oo yar oo geeddi-socodka ah illaa arrimaha oo dhan laga xalliyo.
Dib u soo celinta akoonka ma damaanad qaaday?
anaga, shuraako ahaan, waxaan siineynaa falanqaynta ugufiican iyo racfaanka dib usoo celinta koontada iibiyaha amazon ee ganaaxa. Si kastaba ha noqotee, ma awoodno inaan xakameyno qodobbada ka yimaada dhammaadka Amazon iyo dib u soo celinta koontada 100% lama hubo. Hase yeeshe, waxaan sii wadnay heerka guusha ee in ka badan 98% illaa hadda.
Ma bixinaa dammaanad lacag celin ah?
Xaqiiqdii kuma madadaalin karno lacag-celin laakiin weli waxaa jiri kara shuruudo cusub oo aan tixgelineyno. Faahfaahin dheeri ah akhri siyaasadahayaga celinta.
Waa maxay heerkaaga guusha n ee ku saabsan Adeegga Rafcaanka Amazon?
Nasiib wanaag, Ilaa hadda waxaan sii wadnay heerka guusha ee ka sarreeya ama u dhigma 98%. Waxaan sameynay wax aad u wanaagsan sidoo kale waxaan leenahay 90% heerka haynta macaamiisha sababtoo ah qanacsanaanta macaamilka.
Waraaqda Rafcaanka ee Caalamiga ah ee Aplus Global
Koontadayda iibiyaha 'Amazon' waa la damiyay, sidaa darteed waxaan la xiriiray A Plus Global Amazon si ay iiga caawiyaan qoritaanka qorshe ficil ah oo aan rafcaan uga qaato joojinta.... shakhsi ahaan koontadayda oo aan wax ka qabtay arrimo gaar ah oo aan la soo kulmay kahor intaan furin. Guud ahaan, waayo-aragnimo aad u fiican, waxay ahaayeen kuwo jawaaba oo igu dhex socday hawsha si dib loogu hawlgeliyo koontadayda.waxaan firfircoonaa laba maalmood ka hor! Marka adeegyadoodu hubaal way shaqeeyaan!Akhri wax dheeraad ah
Kadib markaan la imaaday racfaankeyga, waxaan dirayaa 4-5 POA nasiibna maleh. Waxaan si dhab ah uga fikirayay sameynta akoon cusub oo Amazon ah tan iyo markii aanan dib u heli karin akoonkeyga. Ma ogtahay, wali waxaan haystaa lacag xiran... la socota Amazon iyaguna kama jawaabi doonaan mid ka mid ah rafcaanadayda. (emaylka oo leh, "Kama jawaabi karno emayllo dheeri ah oo arrintan ku saabsan"). Kadib, markii aan talo ka helay qof adeegsaday shirkaddan ayaan go'aansaday inaan raaco. Waxaan qatar galiyay oo waxaan idhi waa aniga ayaaba bixiya oo koontadayda dib uhelaa oo socotaa sidoo kale dhaqaalahayga waa la ii soo celiyaa ama waan bixiyaa oo lacag ayaa iga lumaa sidoo kale xisaabtankayga ayaan ku lumiyaa. shirkad iga caawisa sidii aan dib ugu heli lahaa koontadayda. Waxay macno ahaan u soo gudbiyaan POA maalinta ku xigta waxaan helay emayl leh "koontadaada Amazon hadda waa la hawlgaliyay" shaqo si fiican loo qabtay oo waxaan hubaa inaan kugula taliyo Aplus Global! sameeyey. Hel xirfadle kuu qoro POA adiga.Akhri wax dheeraad ah
09:27 29 Meey 21
Waxay ku fiican yihiin waxa ay sameynayaan. Waan u adeegsaday si aan uga caawiyo sidii koontadayda iibiye ee Amazon dib loogu hawlgalin lahaa, waxayna qaadatay muddo, laakiin waligood kama quustaan ​​xisaab. Waxay ii qoreen racfaan ilaa aan ahaa... dib u howlgeliyay. Dib-u-hawl-gelintaydu waxay qaadatay qiyaastii 2 bilood iyo badh, laakiin waxaan haystaa saaxiib adeegsaday adeeggan sidoo kale xisaabtiisiina dib ugu helay dhawr maalmood gudahood. Si aad ah ugu talinaynaa!Akhri wax dheeraad ah
08:26 05 Meey 21
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la shaqeeyo. Adeeg aad u dhakhso badan iyo warqadooda rafcaanka waa mid cajiib ah. Raggaani way yaqaaniin amazon waxay rabaan. Mahadsanid!!
11:07 03 Meey 21
Waxaan la shaqeeyey shirkadan intaa kabadan 100 xisaabood waxayna dib usoo celiyeen badankood. Aad ayey ufiican yihiin adeegga warqadda Rafcaanka ee la soo gaabiyo. Waan sii wadi doonaa lashaqeynta iyaga.
06:17 03 Meey 21
Salaan! Waxaan rabaa inaan kuu sheego: Koontadayda dib ayaa loo howlgaliyay! Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada! Waan ku xasuusan doonaa.
19:24 17 Abriil 21
Ku fiican ganacsiga. Kadib markaan shaqaaleeyay adeegooda oo aan u kuurgalay waxa ay ku qabteen koontadayda. Waa inaan dhahaa waxaan aaminsanahay inaysan jirin wax aysan xalin karin. U sheeg iyaga qofkasta oo dhibaato ku qaba... koontada iibiyaha. Tallaabooyin deg deg ah iyo natiijooyin aad u dhakhso badan!Akhri wax dheeraad ah
23:34 09 Abriil 21
Waxaan kula talin lahaa shirkadan inay qorto warqado kasta oo Amazon Appeal Letters sida ay ogyihiin waxa Amazon raadineyso. Waxaan ku sameeyay cilmi baaris shirkado kale oo aan doortay midkaan tan iyo markii ay heleen waqti ay ila hadlaan... ku saabsan koontadayda. Xaqiiqdii waxaan u maleynayay inaan sugi lahaa 90 + oo lagu daray maalmo si aan u helo lacag siidaynteyda isla markaana xisaabteydu u hakato wanaag. Waad ku mahadsan tahay APlusGlobal sida aad ugu qortay warqaddayda rafcaanka si dhakhso iyo xirfad leh. Waxaan aad u soo jeedinayaa inaad shaqaaleysato xirfadle marki kuugu horeysay aad racfaan ka qaadato dacwadaada. Shirkadani waxay iga caawisay inaan dib u howlgaliyo koonteyda isla maalintii aan racfaan ka qaatay koontada aan ku lahaa warqadooda racfaanka Kaas oo shaqsiyan laga dhigay kiiskeyga. Waad ku mahadsan tahay shaqo weyn!Akhri wax dheeraad ah
Dadka @ APlus Global Ecommerce runti waa wax weyn oo waxtar leh. Heshay hubin xisaabeed oo buuxa oo xitaa waxaan ka helay aragti wax ku ool ah iyaga oo ku saabsan isbeddelada u baahan in la sameeyo Oo malee waxa, waa... sidoo kale wanaajiyay iibintaydaAkhri wax dheeraad ah
APlus Global Ecommerce waa adeeg bixiye weyn oo loogu talagalay adeegga rafcaanka Amazon. Waxaan dib u helay xisaabteydii 72 saac oo ganaax ah.
APlus Global Ecommerce Waxaa lagu geeyay 2 saacadood waxaana dib u soo ceshay Amazon isla markiiba. Xaqiiqdii kan ugu fiican. Qiyaasta dinaar kasta. Taladaydu waxay tahay ha eegin qiimaha sicirka haddii aad rabto natiijooyin Shaqadiisu waa cadaalad... kaamil ah. Ka dib markaan iibsado isgaarsiinta waa dhakhso, waxaan haystay dukumintiga 2 saacadood gudahood isla markaana waxaa la sii daayay wax ka yar 24 saacadood. Waxaan xayiray koontada in ka badan 5 bilood. Waxaan aad ugula talinayaa.Akhri wax dheeraad ah
Koontadayda dib loo soo celiyey wax ka yar 24 saacadood, waxaan kula talin doonaa isaga qof kasta, jooji lacagta badan ee dadka la siinayo oo waxaan ula tagayaa fool maroodi sida ugu fiican ee rafcaanka loo sameeyo! Aad baad u mahadsantahay